Boqashada Obama oo dhalisey dareeno kalo gedisan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Boqashada Obama oo dhalisey dareeno kalo gedisan
La daabacay fredag 30 augusti 2013 kl 15.06
Booqashada la qorsheynayo in uu madaxweyne Barack Obamas ku yimaado Iswiidhen asbuuca fooda nagu soo haye ayaa ka abuurtey Iswiidhen dareemayaal xasaasiya.
Ururu ay leeyaahiin dadyowga Ameerikaanka reer Iswiidhen oo la yiraahdo Democrats Abroad ayaa ku qaban doona xaflad ay ku weeneyn doonan booqashada Obamada. Halka Dhanka kale shabakad la yiraahdo 4 September ay dhankooda qorsheynayaa mudaharaad ay kaga soo horjeedaan booshada Obama iyo siyaasada Mareykanka. Maria Rosén waxaa ruuxa dhidibada u taagey shabakadaan.
- Sidan bey u egtahey. Waa sawir muujinaya derbi shub ah oo ay ku qorantahay waqtiga iyo meesha kana muuqato kaamirada wax ilaalisa iyo hooska deyuuradaha duuliyo laanta ah. Waxaan ku qoran ”ku mudeharaada ilaalinta xad-dhaafka ah iyo siyaasada dagaal ee Mareykanka iyo Nato”. Hal heyska mudeharaadakan waxuu noqonayaa diidney Big Brother Obama, ayey tiri Maria Rosén oo ka socota shabakada 4 september.
Qol ay ka buuxaan armaajada buugaagta oo ku yaala Södermalm ayey Maria Rosen ku sugantahay, waxeyna diyaarineysaa iidhehda mudeharadkan. Sabakada 4 september ayaa ah shabkad kulmisa labaatameeyo urur oo ku mudeharaadi doona barxada Mynttorget magaalada Stockholm marka uu Obama booqashada ku yimaado Iswiidhen asbuuca soo socda. Inkastoo ururada xubinta ka ah shabakadan ay yahiin kuwo kalo gedisan hadana waxey ka mideysanyahiin aragtida ah diidamada bulsho ku dhisan ilaalo iyo dabo-gal.
-waxaa ka soo horjeedanaa bulsho u dhisan sida walaal weyn oow ax ilaalinaya oo noqota wax layska aqbalo ilaalin iyo dabo-gal xad dhaaf ah. Waxaan rabnaa qaab dhaqanmeedka noocan ah in aan sharaxno oo aan la mid dhigno sida barnaamijka tv_ga ka baxe ee Big Brother kaas oo ah barnaamij dadka lagu xiro qolyar oo ay ay kaamirooyin ku xiran yahiin. Marka waxaan rabnaa in aan muujino in maanta ay bulshadeena sidaas camal tahay. Qaabkaas ayaa rabnaa in aan dadka ugu muujino in Mareykanka iyo siyaasadiisa ay tahay walaal weyn oo caruurta ka yaryar ilaalinaya balse caruurta ay ilaaliadiisa ka soo xorjeedaaan, ayey tiri.
Kadib markii Edward Snowdens kashifey in Mareykanka uu ilaalo iyo dabo-gel weyn ku hayo qadka internetka ayey arimahan noqdeen kuwo maanta xiiso leh ayey raacisey Maria Rosén. Waxeyna aad uga welwelsan tahay hab-dhaqanka Mareykanka ee la xiriira siyaasadiisa ilaalada iyo dabo-galka ku dhisan. Waxeyse rajeyneysaa in dowladda Iswiidhen ka faa'ideysan doonto booqashada Obama oo ay kalo hadli doonto arimahan.
- Ilaalinta iyo dabo-galka waxaan qabaa in ay tahay wax ay aad iyo aad mahuum u ah in laga hadlo waayo waa wax meel ka dhac ah in ilaalo iyo dabo-gal lagu sameeyo muwaadiniintaada, waxaase ka sii daran in la ilaaliyo muwaadiniinta dalalka kale, ayey tiri
dhanka kale ururka Democrats Abroad oo ah gacanta dheer ee dibada ee xisbiga Mareykanka Demokaraatiga uuna ka tirsanyahey madaxweyne Obama. Ayagana waxey u diyar garoobanayaan booqashada Obama ku imaanayo Stockholm. Deedee Gierow waa gudoomiyaha ururkas, Laakiin aad bay ayada ugu faraxsantahey booqashada Obama.
- Waa arin dereenkeedo yahay cajaa ib. Waxaan qabaa in ay tahay kulan aad muhiim u ah oo dhex mari doona Iswiidhen iyo Mareykanka.
Deedee Gierow ayaa sheegtey in ay fahmasan tahey dadka raba in ay ku mudeharaadan booqashadan. Balse waxey ka gaabsatey in ay fikirkeeda ka dhiibato arimaha ilaalada iyo debo-galka internetka ee ay Maria Rosén sheegtey in ay tahay arinta ugu muhiimsan in booqahsadan looga dooda. Waxeyse Deedee Gierow sheegtey in ay jiran wax ay dowladda Mareykanka ka baran karto Iswiidhen.
- Arin wanaagsan oo ay Iswiidhen aad ugu fican tahay waxa weeye waxa la yiraahdo Teknoolajiyada cagaaran green technology waxaana rajeynayaa in arimahaas booqashada looga hadlo.
Ururka Democrats Abroad ayaa xafled weyn ku qabsan doona magaalada Stockholm si ay u weeneeyaan booqashada Obamad. Laakiin Deedee Gierow ayaan maleyneynin in xafladooda ay ka soo qayb geli doonaan marti sharafka la socda laakiin waxey rajeyneysaa in ay daymo yarba ha ahaatee ay araki doonto Obama.
Dhanka kale lokalka ku yaala Södermalm oo ay shabadaka 4 september ku diyaarinayaan mudaharaadkooda ayaa waxaa ka socota shaqo faro badan oo lagu diyaarinayo waraaqahii iyo iidhehdii. Waxaana diyaarinta mudeharaadka si tabo racaad ah uga qayb qaadanaya dhallinyaro faro badan. Waana howl diyaarinteeda ay socotey maalmo badan.balse Marie Rosén ayaa aaminsan in mudeharadkan keenin doonin wax saaameyn siyaasadeed oo sidaas u weyn.
Laakiin waxey sas oo ay tahay fileysaa in uu noqon doono mudeharaad wanaagsan oo ay dadyow kalo gedisan ka soo qayb galaan,noqdana mid loo arki doono dhaqdhaqaaq cusub oo weyn.